Bale: Waa suuro gal inaan ku guuleysanno La Liga waana ku dagaalameynaa – Gool FM
(Madrid) 01 Maajo 2016. Gareth Bale ayaa sheegay inay ku dagaalami doonaan ku guuleysiga La Liga ilaa dhammaadka.
Kaddib guushii soo daahday uu ku hogaamiyay Real Madrid kulankii shalay ee Real Sociedad, wiilka reer Wales ayaa ka hadlay sida ay xisaab ahaan weli suuro gal u tahay inay hantaan horyaalka Spain.
Bale ayaa qaab ciyaareed fiican helay kal ciyaareedkan wuxuuna weli guulo ku hogaaminayaa kooxda iyadoo uu ka maqan yahay kaabahooda Cristiano Ronaldo.
“Waynu garaneynaa haddii ay tahay inaan ku guuleysano horyaalka waa inaan guuleysnaa kulan kasta, kulankastaa oo haray waa Final, inta uu La Liga suuro gal yahayna waynu ku dagaalami doonaa ilaa dhammaadka xilli ciyaareedka,” Bale ayaa sidaa yiri.
Mar uu ka hadlayay maqnaanshaha wiilasha la dhameystira magaca BBC ee Benzema iyo Ronaldo ayuu misane yiri: “Waa labo weeraryahan oo waa wayn, laakiin koox wayn ayaynu heysanaa, shaqo wacan kaddibna waxaynu gaarnay natiijadan fiican,”.
Gareth Bale oo ka hadlaya kulanka Man City ee Champions League ayaa yiri: “Wuxuu noqon doonaa kulan aad u adag, waa inaynu ku dheelnaa mid la mid ah awooda ugu badan oo aynu ku sameynay Anoeta. Iyadoo ay nala jirto taageerida taageerayaasheena waxaynu filanaynaa inaan gaarno Final ka Champions League.”.
MSN oo jabiyay Rikoodh ay horey u dhigeen misane doonaya inay ku kale dhigaan
Kooxda Brighton oo taako u dhigtay Chelsea oo ay ku booqatay garoonka Stamford Bridge… +SAWIRRO
Shaxda rasmiga ah kulanka Kooxaha Chelsea iyo Everton ee horyaalka Premier League oo la shaaciyey